आज रविको जन्मदिन होइन, यस्तो भने फेसबुकबाट - Everest Dainik - News from Nepal
आज रविको जन्मदिन होइन, यस्तो भने फेसबुकबाट
काठमाडौं, मंसिर १५ । जारी नेपाल आइडलको ‘टप फाइभ’ मा पुग्न सफल भएका रवि ओडको चर्चा शिखरमा छ । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरका रवि ‘दमदार’ प्रस्तुती दिदै आइडलको ‘टप फाइभ’ मा पुग्न सफल भएका हुन् ।
आइडलको यात्रासँगै रविका समर्थक पनि हात्तै बढेका छन् । उनका हरेक गतिविधिमा स्रोता-दर्शकको ध्यान जाने गरेको छ । यसैबीच, आज रविको जन्मदिन भनेर एकाबिहानै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा थियो । तर, यो वास्तविक जन्मदिन नरहेको स्वयम् रविले नै जनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस भोटिङ लाइन बन्द, कसले पाए होला सर्वाधिक भोट ?
जन्मदिन हो तर फेसबुक जन्मदिन ! उनले फेसबुक अकाउण्ट खोल्दा गलत मिति पर्न गएकाले आज जन्मदिन देखिएको बताए । वास्तविक जन्मदिन भने चैत्र १ गते रहेको रविले फेबसकमा लेखेका छन् ।
ट्याग्स: Birthday, nepal idol, Ravi oad